शान्ति कायम राख्‍नेले धार्मिकताको फसल बटुल्छन् : NepalChurch.com
Picture was taekn in Paimi, Tanahun. Photo by Sarju Rijal.
“शान्‍ति कायम राख्‍नेहरूले शान्‍तिमा छर्छन्‌, र तिनीहरूले धार्मिकताको फसल बटुल्‍छन्‌। ”
प्रायगरी मानिसले आफ्नो लागि मात्रै चिन्ता गर्छ। अनि परिवारको लागि , अनि आफन्तजनको लागि अनि मात्रै अलि परको लागि वास्ता गर्ने गर्छ। हरेक मानिसमा हुने मानविय स्वभाव यो पनि हो। थोरै मानिसहरू हुन्छन् जो आफ्नो लागि भन्दा अरूको लागि वास्ता गर्ने, आफूले जोखिम लिएर पनि अरूलाई सहयोग गर्ने। जुन कुरा येशू ख्रीष्‍टले मानिसको रूपमा यस पृथ्वीमा जन्म लिएर मानिसहरूलाई आफ्नो जीवनबाट शिक्षा दिनुभएको छ। जसले आफूलाई ख्रीष्‍टियान भन्छ उसको जीवनमा ख्रीष्‍टले सिकाएको कुरा हुनुपर्छ। बाइबल अध्ययन गर्नेहरूको जीवनमा वा येशू ख्रीष्‍टलाई विश्वास गरेकाहरूको जीवनमा त्यस्ता केही कुराहरू देखिनुपर्छ। ताकि उनिहरूको जीवनबाट येशू ख्रीष्‍टलाई मानिसहरूले थाह पाउन सकून्।
जब मानिसका इच्‍छा, चाहना, स्वार्थ र आवश्यक्ताहरू बढ्दै गए तब अशान्ति, अभाव, लुटपाट, भ्रष्‍टाचार, झैझगडा, दुष्मनी पनि दिन प्रतिदिन संसारमा बढ्दै गएका छन्। मानिसहरूको जीवनमा शान्ति, आनन्द, मनोरोञ्‍जन, आत्याध्मिक अभ्यास, ज्ञान र नैतिक जीवन कायम राख्‍न आवश्यक छ। यसको लागि सही मार्ग निर्देशन, शिक्षा, सिद्धान्त र दर्शनको खाँचो हुन्छ। ताकि मानिसका जीवनका आवश्यकताहरू पुरा हुन सकून् र शान्ति आनन्द कायम हुन सकोस्। बाइबलमा याकूब ३:१८ मा यसरी बताइएको छ: “शान्‍ति कायम राख्‍नेहरूले शान्‍तिमा छर्छन्‌, र तिनीहरूले धार्मिकताको फसल बटुल्‍छन्‌। ”
शान्ति कायम राख्‍नेहरू मानिसहरूलाई बुद्धिमान् मान्न सकिन्छ किनकि तिनीहरूमा स्वर्गबाट आएको बुद्धि हुन्छ। तिनीहरू धार्मिकताको फसल बटुल्छन्। तिनीहरूले धार्मिकताको बाली काट्नेछन् । “धोकामा नपर, परमेश्‍वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्‍दछ त्‍यसैको कटनी पनि गर्नेछ” (गलाती ६:७)। शान्ति कायम राख्‍नेहरूले आफ्ना जिब्रोलाई अधीनमा राख्‍न सिकेका हुन्छन्। शान्ति कायम राख्‍न हरेकले प्रयत्‍न गर्नुपर्दछ। शान्ति आनन्द येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मात्रै पाउन सम्भव छ।
पुनस्र्थापन चर्च भवन समर्पण तथा अभिषेक समारोह »